GUBASHADA OOGEECADA: SIDA LOO DHAQDO SI QUMMAN, DHARKA MAQAARKA - BEERAHA DIGAAGA
Gacmaha qoyan ee guriga
Ma yaabi kartid qof kasta adoo digaaga ama turkiga, iyo faa'iidada dhaqaale ee noocaas oo kale ah maaha mid weyn sababtoo ah joogitaanka tartan sare. Sababtan awgeed, dad badan ayaa loo qaataa taranka dhirta, kuwaas oo bixiya noocyo dhawr ah oo badeecado ah. In this article waxaan u tixgelin doonaa dhibaatada ugu muhiimsan ee breeders - gabbaadka shimbiraha. Waxaad sii baran doontaa diyaarinta iyo marxaladaha dilka xayawaanka.
Intee ayey leofisku u koraan si loo gowraco
Diyariga waa la gowracay kadib markii ay heleen miisaan ku filan. Maadaama geeddi-socodkani uu ku tiirsan yahay wax badan oo ku saabsan cuntada, halkii uu ka weynaan lahaa, waxaa lagu hagayaa miisaanka jirka. Ragga waxaa loo diraa in la gowraco kadib marka ay helaan 120 kg oo ah miisaanka nool. Maadaama aysan loo isticmaalin in ay soo saaraan ukunta, wax dhib ah ma lahan mawduucooda kale. Dumarka waxaa loo tixgeliyaa diyaar u ah in la gowraco haddii ay leeyihiin tiro ah 100 kg.
Si aad u hesho hilib tayo sarre leh oo loo baahan yahay, dhirbaaxo ayaa la koray illaa laba sano, ka dib markii taas oo isla markiiba lagu gowraco iyaga oo si firfircoon loogu quudiyo qudaarta sare.
Ma taqaanaa? Daraasadaha waxaa loo saari karaa xayawaanka aan cirridka lahayn, sababtoo ah, marka lagu daro cagaarshka iyo abuurka, waxay sidoo kale ku dari karaan cayayaanka ama jiirka yaryar.
Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor inta aan la gowraco
Daraasaddu waxay ka duwan tahay digaag aan ahayn oo keliya, laakiin sidoo kale dabeecad. Haddii aad bilowday in aad ku dhalatid shimbirahan, markaa waxaad u baahan tahay inaad barato xeerar dhowr ah oo muhiim ah oo kaa caawin doona in si deg deg ah loo fuliyo qaliinka, laakiin sidoo kale ma helno dhaawac culus.
Video: sida loo dilo dhirta
Ha ku dhicin awoodda dhirta. Xayawaanku kuma badna oo kaliya cabbirka ballaaran, laakiin sidoo kale marka ay joogaan johannesburg oo si wanaagsan u horumarsan, sidaas darteed marnaba ha cabsanin oo garaacin shimbiraha ka hor inta aan la gowraco. Daraawadka qaangaarka ah ayaa si fiican u jebin kara lafahaada, iyo sidoo kale dhaawacyada xubnaha gudaha.
Yaa koraya, wuu dhaliyaa. Meelaha miyiga, waxaa jira had iyo jeer qof dila qolfaha. Khabiir ku takhasusay beerkiisa ayaa si dhakhso ah u daadshay doofaarka iyo dhibaatooyin la'aan. Tani ma noqon doonto sidan oo kale oo leh diiqad, maadaama shimbirahan ay caadaysteen hal hoy, kuwaas oo lagu qasbay in ay gawracaan. Marka ugu fiican, shimbirta uma ogolaanayso qof qalaad u ah naftiisa, iyo marka ugu xun - way xanuun badan tahay. Sababtan awgeed, waa lagama maarmaan in la sameeyo si loo isticmaalo duurjoogyada, haddii kale waxaad u baahan tahay inaad u diyaariso ugaadhsi dhab ah.
Cadaadiska iyo cawaaqibkiisa. Gawaarida waxaa mar walba laga qaadaa meeshii xoolaha lagu hayo, haddii kale waxaad la kulmi doontaa xaqiiqda ah in gorayada lagu isticmaalay ayan marnaba u oggolaan doonin in ay soo dhowaadaan. Haddii shimbiruhu arkayaan adiga oo ku jeesjeesa "walaal", markaa mustaqbalka si aad uga hesho meel kasta oo aan ku guulaysan.
Waa wax xiiso leh in lagu barto asaasiga ah ee duurjoogta dhirta guriga.
Sida loo dhaliyo dhiiqada
Tixgeli sifooyinka qoryaha, iyo sidoo kale u diyaargarowga nidaamkan. Ka hadal xasuuqii, kaas oo lagu fuliyay gawaarida, iyo sidoo kale hababka lagu gowraco guriga.
Waxaad u baahan tahay inaad haysato qalabka soo socda:
jajab khaas ah oo cajiib ah;
joodar dhaadheer oo waaweyn oo loogu talagalay;
Dilka shimbir ayaa loo qaybiyaa dhowr marxaladood, waa in la sameeyaa si isdabajoog ah si aan u dhicin badeecada oo aan waqti ku qaadan.
Waa muhiim! Ka hor inta aan la geyn xayawaanka waa in aan la dhicin, haddii kale tayada hilibka ayaa si weyn u sii xumaanaya.
Siminaarada waaweyn, dhirbaaxada ayaa la yaabay iyadoo la adeegsanayo tamarta korontada oo leh tamar ah 240 V, kaas oo loo adeegsanayo 6-7 ilbiriqsi. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhowr saacadood ka fogeysid shakhsiyaadka. Hoyga, qoob-ka-jar-jare ayaa loo isticmaalaa in lagu garaaco shimbirta madaxa. Dhabarjirku waa inuu si toos ah ugu dhacaa bartamaha madaxa si uu shimbirta u damiyo. Haddii kale, waa inaadan udoonayn macaan, sida dheriga caajiska ah ee isku daya inuu isku dayo inuu qolka ka baxo ama uu kugu weeraro.
Ka dib markii la yaabay, dhagxaanku waa la gooyaa xididka jugular, oo ku yaal qoorta, ama madaxa gebi ahaanba waa la gooyaa. Kadibna, adigoo isticmaalaya qabatooyin, bakhtigu waa la duugaa, sidaa awgeed dhiiggu si dhakhso ah ayuu uga fiican yahay galaaska. Kaliya kadib markaad dhiigga ka baxdo jirka, waxaad sii wadi kartaa marxaladda xigta. Caleemaha khibrad leh ayaa jarjaraya xididka ugu weyn, kaas oo ku yaal meel u dhow wadnaha. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad dardargeliso hawsha oo dhan, maadama ay dareeraha ku soo baxaan cadaadis.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u ogaato tiknoolajiyada qashinka iyo ka shaqaynta digaagga, shimbiraha, boodhadhka, berriga, turkiga.
Ka dib markii la gowraco waxaa lagama maarmaan ah in si habboon loo ruxo dheriga. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagu talinayaa in lagu marti qaado takhasus ah oo fulin doona nidaamkan, oo kuu ogolaanaya inaad iibiso alaabo xasilooni mustaqbalka. Haddii ruxidda lagu fulin doono asxaab, ka dib bacaha la soo ururiyey waxay noqon doonaan tayad liidata, taas oo ah sababta ay u adkaan doonto inay iibiso.
Fiidiyowga: Dareemidda ruxashada Waa muhiim markaad ruxayso inaadan dhaawac u geysan maqaarka. Xitaa cadaadiska ugu yar ayaa si weyn u yareeya kharashka. Maadaama maqaarka lagu iibiyo xagasha, waxaad lumin kartaa faa'iidada.
Waa muhiim! Inta lagu jiro nuugista, biyaha karkariga ah looma isticmaalo, haddii kale baaluhu waa la burburin doonaa.
Dharka dharka: hababka
Ka dib markaad nuugo, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro maqaarka si loo sii wanaajiyo oo loo iibiyo. Qofna ma iibsan doono dharka yaryar oo yaryar, sidaa daraadeed waa muhiim in la ogaado sifooyinka gaarka ah ee kala soocida daboolka hilibka iyo lafaha.
Ka saarista maqaarka
Isla markiiba ka dib markaad ka saarto dhammaan baalasha, waa inaad isla markaaba u gudubtaa maqaarka maqaarka:
Si taas loo sameeyo, samee jeexnaanta bartamaha caloosha, iyo sidoo kale gudaha iyo lugaha gudaha. Si taxadar leh u sii qaad adeegsiga lafdhabarta mindida. Maqaarku waa inuu lahaadaa meel u dhow dhismaha.
Haddii ay ka kooban tahay dheecaan, dufan, hilib, ama haraad ka mid ah cuntada aan la isticmaalin, markaas dhamaan kor ku xusan waa in laga saaraa ka hor inta aan la furin.
Marka xigta, maqaarku wuxuu ku faafaa dusha nadiif ah si uu u qaboojiyo.
Ka dib marka la qaboojiyo, maqaarka waa in loo xafidaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si uusan u bilaabin inuu waxyeello. Dhaqanka caadiga ah ama cusbada badda waxay u adeegtaa sida ilaaliye. Haddii geedi socodka qallafsan uu bilaabmaa ka hor, ka dibna ma iibin kartid alaabta.
Waa muhiim! Qayb kasta oo sheyga waa in la miisaamaa.
Hannaanku sidan ayuu u egyahay:
Maqaarka waxaa lagu faafiyaa daaqad nadiif ah oo nadiif ah si ay qaybta hoose ee ku dhajiso hilibka, ay kor ku taal.
Kadibna waxaa lagu daboolay cusbo. Miisaanka loo yaqaan 'preservative' waa inuu noqdaa laba jeer miisaanka maqaarka.
Ka dib markaa, dhammaan maqaarka ayaa la duubayaa oo loo diraa qaboojiyaha ilaa 60 saacadood. Waa mamnuuc in la dhigo.
Ogsoonow in qoyaanka yar ee gudaha ku jira, ay adagtahay in la qaado, sababtoo ah waxay noqotaa mid jilicsan. Haddii maqaarku yahay mid aad u qalalan sababtoo ah xaqiiqda ah in cusbadu ka soo baxdo biyo badan, markaa waxay bilaabi doontaa inay jabiso oo noqoto wax aan faa'iido lahayn. Waa muhiim in la ilaaliyo qoyaan ka badan 15%.
Waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad ogaato haddii aad cuni karto ukunta dhiiqada.
Ka dib markii lagu ilaaliyo, wajiga qiimeyntu wuxuu daba socdaa, inta lagu guda jiro xajmiga iyo tayada alaabta. Xajmiga, maqaarka waxaa loo qaybiyaa dadka qaangaarka ah, subadult iyo dhalinyarada. Dadka qaangaarka ah waa kuwa ugu qaalisan, iyo dhallinta, siday u kala horreeyaan, ugu raqiisan.
Noocyo kala duwan:
fasalka koowaad (ilaalinta ugu fiican, maqnaanshaha cilladaha, joogitaanka baqshiinka laga soo qaaday baalasha iyo lugaha);
darajada labaad (maqaar fiican oo la gashaday oo leh hal cillad);
darajada saddexaad (wax soo saarka tayada caadiga ah leh laba cillado);
ma aha varietal (tayada qarsoodiga ah, ilaalinta saboolka ah ama joogitaanka "foojignaan").
Ma taqaanaa? Dhoobabku waxay u baahan yihiin baalasha oo kaliya si ay ula falceliyaan cayaaraha iyo ilaalinta dhallinyarada. Waxay isticmaalaan lugaha awoodda leh inay weeraraan.
Nidaamka gawracatada qashinka lama fududeyn karo, sidaa darteed, shaqadani waxay ku lug leedahay khabiiro takhasus leh oo aan ku hawlan kaliya rooga iyo maqaarka, laakiin sidoo kale sii kordhaya. Tani waxay kuu saamaxeysaa inaad ka baxdo khasaaro dhaqaale, iyo sidoo kale kordhinta wareegga.